InVision: Prototyping, Mmekọrịta na Arụ Ọrụ | Martech Zone
InVision: Prototyping, Mmekọrịta na Arụ Ọrụ
Saturday, May 30, 2015 Wednesday, June 17, 2015 Douglas Karr
N'oge na-adịbeghị anya, enwetara m email na njikọ dị n'elu nke kwuru na ndị folks na-emepụta email ọhụrụ ma chọọ nzaghachi anyị. M pịa na njikọ ahụ ma ọ bụ ngosipụta a na-enweta n'ihu ọha nke imepụta email ọhụrụ site na ụlọ ọrụ ahụ. Ka m na-enyocha peeji ahụ, enwere ebe ọkụ ọkụ (gburugburu uhie) enwere ike ịpị na nzaghachi akọwapụtara nke ndị na-eleta ibe ahụ.
M pịrị otu ebe m chere na enwere ike inwe ndozi ụfọdụ, mkparịta ụka wee meghee ka m tinye nzaghachi m wee rịọ aha m na adreesị ozi-e. Njirimara onye ọrụ achọghị ntụziaka ọ bụla - Amaara m nke ọma ihe m nwere ike ime.
Ulo elu ya di nma nke mere na m gara ileta ulo, Mkpo ya. Nwere ike ịnwale ikpo okwu maka ọrụ 1 na-akwụghị ụgwọ wee rụọ ọrụ ndị na-esote chọrọ ego ego ọnwa. Atụmatụ ha niile gụnyere ihe nzuzo 128 bit SSL na nkwado ndabere kwa ụbọchị.
Mkpo ya na-enye ndị ọrụ ohere ibugo atụmatụ ha ma gbakwunye ebe ọkụ iji gbanwee ihu igwe na-agbanwe agbanwe, ihe ngosi mmekọrịta na mmeju, ntụgharị, na ihe ngosi. Akụkụ gụnyere njikwa nsụgharị, njikwa ọrụ na ntinye aka maka websaịtị, mkpanaka na mbadamba, ikike iji chee ma kesaa atụmatụ, yana ngwa pịa na ikwu okwu iji kpokọta nzaghachi na atụmatụ.
Tags: mmekotaimewe mmekotamwakpoinvision ngwaprototypingweb imewenjikwa ọrụ ntanetịOru oma
Ugbu a nke B2B Marketing Automation